Magacaabistii Abiye Ahmed oo dalka Itoobiya ka dhalisay colaad Orommada iyo qowmiyadaha kale u dhexeysa. – Madal Furan
Hoy > Warka > Magacaabistii Abiye Ahmed oo dalka Itoobiya ka dhalisay colaad Orommada iyo qowmiyadaha kale u dhexeysa.
Magacaabistii Abiye Ahmed oo dalka Itoobiya ka dhalisay colaad Orommada iyo qowmiyadaha kale u dhexeysa.
Madal Furan – Waddanka Itoobiya oo ay ku nool yihiin in ka badan 70 qabiil oo kala dhaqan iyo af ah, waxa sanooyin badan ka jiray wada noolaansho ay qabaa’ilkaas ku wada noolaayeen waddankaas ka wada dhaxeeyey.
Hase yeeshee muddadii sannadka ahayd ee u dambaysay ayey arrintu si la yaab leh isu beddeshay.
Kacdoonno rabshado watay ayaa dalka ka dhacayey, kuwaasoo u badnaa deegaannada ay degto qowmiyadda ugu tirada badan oo ah Orommada.
Taasi waxay keentay in uu is casilo ra’iisul wasaarihii dalka ee xilligaas Hailemariam Desaleng, waxaana isla markiiba xisbiga talada haya uu ra’iisul wasaare u magacaabay Abiy Axmed oo loo arkayey in uu yahay nin ay Orommadu ku degi doonto magacaabistiisa.
Magacaabistii Abiy Axmed
Xaaladdu waxay sii darsatay wixii ka dambeeyey magacaabistii Abiy Axmed.
Qalalaase ka dhacay bishii hore gobolka Soomaalida, ayaa waxaa aakhiritaankii xukunka ka degay madaxweynihii dawlad deegaanka Soomaalida, Cabdi Maxamuud Cumar, waxaana maalmo ka dib lagu xiray magaalada Addis Ababa, halkaasoo uu ilaa hadda ku xiran yahay.
Rabshado qabiil ku salaysan ayaa meelo kala duwan ku dhex maray Soomaalida iyo Orommada, kuwaasoo la aaminsanaa in aysan dhici doonin mar haddii uu Cabdi meesha ka baxay, ra’iisul wasaaraha Itoobiyana yahay nin Orommo ah.
Dad badan waxay u haysteen in Abiy Axmed uu qabiilkiisa dejin doono.
Maxay dhibaatooyinka u soo noqnoqonayaan mar haddii uu nin orommo ah xukunka hayo?
C/qaadir Sheekh bashiir waa nin aad ugu dhuun daloola taariikhda Itoobiya iyo arrimaha hadda ka socda.
“Arrintan waxay salka ku haysaa dhallinyarada Orommada ee lagu magacaabo Qeerroo. Markii hore Orommadu isku hadaf ma ahayn, wayna kala qayb-qaybsanaayeen, dawladihii horena kala qaybsanaantooda ayey ka faa’iidaysteen. Xisbiga Orommada ee la bahda ah EPRDF ayaa waxaa soo galay dhallinyaro Orommo ah oo firfircoon oo wax walba ka hormarinaya danta Orommada, ka dibna waxay siyaasad ahaan iyo mabda’ ahaanba u mideeyeen dhallinyaradan” ayuu yiri C/qaadir.
Wuxuu intaa ku daray in la abuuray dallad ay dhallinyaradaas hoos tagaan, “taasoo hal shakhsi ka amar qaadata, taasina waxay noqotay kacdoonkii dhallinyarada inuu noqdo min gees ilaa gees mid isku xiran oo abaabulan”.
Kaadiriinta Orommada ee isku xiray dhallinyaradooda
Wuxuu intaa ku daray in aqoonyahannadii caqligaas keenay ee hogaaminayey in Orommadu isku xirnaan yeelato ay ahaayeen Lemma Megersa oo ah madaxweynaha dawlad deegaanka Oromia, iyo Abiy Axmed oo hadda ah ra’iisul wasaaraha Itoobiya.
“Lakinse waxay ahayd mar haddii Abiy Axmed xilka uu qabtay, in dhallinyaradaas la dejiyo. Bacdamaa ay ahaayeen dhallinyaro fara badan oo hal shakhsi ka amar qaata (Jawar Maxamed)” ayuu yiri C/qaadir.
Wuxuu intaa ku daray in dhallinyaradaas si loo kiciyo loo sameeyey cadaw been abuur ah, ayadoo “shucuubta kale ee Itoobiya loo tusay in ay lid ku yihiin”.
Natiijadii ka dhalatay ayuu sheegay C/qaadir in ay noqotay mid la xakamayn waayey oo keentay in deegaanno badan dad lagu laayo, goobo lagu cibaadaysto la gubo, warshado ay ku jirto mid uu lahaa Aliko Dangote (ninka Afrika ugu taajirsan) in la burburiyo.
“Maadaama aysan jirin cid falalkaas loo soo qabtay, ururka Qeerroo-na ay aaminsan yihiin in Abiy Axmed ay iyagu meesha keeneen, ma muuqdo qorshe istaraatijiyadeed oo mustaqbalka dhallinyaradaas lagu dajiyo, shaqo abuurna loogu sameeyo, taasina waxay keeneysaa in rashaduhu ay sii socdaan” ayuu Yiri C/qaadir Sheekh Bashiir.
Orommada iyo Amxaarada
Rabshadihii u dambeeyey waxay Magaalada Addis Ababa gudaheeda iyo duleedkeeda ku dhex mareen ururka Qeerroo iyo urur la yiraahdo Fana oo ay leeyihiin dhallinyarada qabiilka Amxaarada. Haddaba ilaa iyo intee buu sii socon karaa isku dhacooda?
“Amxaarada waxaa lagu yaqaannaa isla weyni iyo kibir, Orommaduna waxay isu arkaan dad la yasi jiray oo la soo gumaystay oo hadda madaxa kor u soo qaaday, markii horena heshiis ayey ku ahaayeen si aan fiicnayn. Haddaba waxay u eg tahay in mushkiladda dhex taalla ay muddo sii socon doonto.
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya wuxuu sheegay in uu wax ka qaban doono rabshado ka dhacay Ashawa Meda oo ah deegaan Oromadau degto oo ku yaalla galbeedka Addis Ababa, halkaasoo la sheegayo in lagu bartilmaameedsaday dad Amxaarada ka so jeeda.
C/qaadir wuxuu aaminsan yahay in kolonyo wadday Daa’uud Ibsa, hogaamiyaha jabhadda Orommada ee OLF, loo diiday in ay galaan Burayu oo ah halka ay ku taallo Ashawa Meda, “laakin dawladdii ayey u muuqataa in aysan ka go’nayn in arrinta labadan koox xal laga gaaro, ama haddii uu Daa’uud dhibku yahay laga joojiyo safarkaas” ayuu yiri.
Wuxuu intaa ku daray in arrintaas la sii ogaa in ay tahay mid ka caraysiin karta Amxaarada, “waayo dhallinyaro badan oo Orommo ah ayaa baabuur lagu soo daad gureeyey, kuwaasoo calanka Orommada meel kasta ka taagay, waxaana ognahay in magaalada Addis Ababa ay 60% dadka deggan u badan yihiin qabiilka Amxaarada, halka ay hareeraha magaaladana deggan yihiin Orommada”ayuu yiri C/qaadir.
Saamaynta rabshadaha ee mustaqbalka
Inkastoo uu Abiy Axmed wax badan ka qabtay xiriirka gobolka, gaar ahaan cilaaqaadka Itoobiya ay la leedahay dalalka deriska la ah, misna C/qaadir Sh. Bashiir wuxuu aaminsan yahay in marka hore looga fadhiyey ra’iisul wasaaraha inuu wax badan ka qabto arrimaha gudaha.
“Caqabadaha gudaha ka jira ayey ahayd in wax laga qabto sida Soomaalida iyo Orommada, Tigreega iyo Amxaarada, shucuubta koofureed iyo Orommada, intii uu dibadda ku sii jeeday dalkii ayaa ku sii dhow inuu kala daato. Sidaa darteed haddii odayaasha iyo cuqaasha iyo waxgaradka aan laga qayb galin xalka, waddanka Itoobiya khatar ayuu ku jiraa” ayuu yiri C/qaadir.
Inta la ogyahay dad ka badan 20 qof ayaa ku dhintay weerarradii ay dhallinyarada Orormmadu ku qaadeen duleedka caasimadda. Ilaa 200 dad gaaraya ayaa markii ugu horraysay loo xirxiray rabshadaha Itoobiya, laakinse ma cadda in taasi ay joojin doonto rabshadahaas sii darsanaya.
Gaalkacyo:- Bakhaar hubka lagu keydiyo oo dab qabsaday.
Wasiirka Warfaafinta XFS oo Faah-faahin ka bixiyey Qaraxii ka dhacay Xarunta Dawladda Hoose.
Madaxweyne Xaaf oo ka dhoofay Garowe “mindhaa waa la heshiin doonaa mar ay nooqtaba”